Ngathi -Shanghai IVEN Pharmatech Engineering Co., Ltd.
I-Shanghai IVEN Pharmatech yobunjineli Co., Ltd.
I-Shanghai IVEN Pharmatech Engineering Co., Ltd. yasekwa ngo-2005, ineefektri ezine zobuchwephesha zoomatshini abaxuba amayeza, ukuqokelela ityhubhu yoomatshini begazi, izixhobo zonyango lwamanzi kunye nokupakisha okuzenzekelayo kunye nenkqubo yokuqonda.
Sibonelela ngesisombululo esidityanisiweyo sobunjineli kumzi mveliso wamayeza kunye nomzi mveliso wezonyango ngokuthobela i-EU GMP / US FDA GMP, WHO GMP, PIC / S GMP siseko njl. uyilo olusengqiqweni lweprojekthi, izixhobo ezikumgangatho ophezulu kunye nenkonzo elungiselelwe wena yeefektri zoxubo mayeza / zonyango ezivela kumazwe ahlukeneyo.
Isisombululo sobunjineli esidityanisiweyo se-IVEN sefektri yoxuba kunye neyonyango kubandakanya igumbi elicocekileyo, ulawulo oluzenzekelayo kunye nenkqubo yokujonga, inkqubo yokunyanga amanzi, isisombululo ukulungiselela kunye nokuhambisa inkqubo, inkqubo yokugcwalisa nokupakisha, inkqubo yolwazi ekrelekrele, inkqubo yolawulo lomgangatho, ilabhoratri esembindini njalo njalo . Ijolise kwiimfuno zabathengi ezizodwa, IVEN izenzela izisombululo zobunjineli ngocoselelo kubasebenzisi:
Sithumele ngaphandle izixhobo ezingamakhulu kumazwe angaphezu kwama-40, sikwabonelela ngaphezulu kweeprojekhthi zamayeza ezi-turnkey kunye neeprojekti ezininzi zonyango. Ngeenzame ezinkulu lonke ixesha, safumana izimvo zabathengi bethu kwaye samisela igama elihle kwimakethi yamanye amazwe ngokuthe ngcembe.
Ngokusekwe kwiimfuno zabasebenzisi abavela kwihlabathi liphela, i-IVEN ngokuqhubekayo isenza uphando olunzulu kunye nokufunda kuphuhliso lwamayeza ezamayeza kunye nonyango, jonga ingqalelo kwimveliso yokhuseleko lwamayeza kunye neemveliso zonyango, landela ukuphuculwa okungapheliyo koomatshini kunye neprojekthi umgangatho. Siza kusebenzisana ngokunyanisekileyo namashishini oxubo mayeza kunye nonyango avela kwihlabathi liphela, sikhule kunye kwaye senze iinzame zokuzinikezela kwimpilo yabantu.
* Inkonzo yokubonisana ngaphambi kobunjineli
* Uyilo lwenkqubo yokuvelisa
* Uyilo loMxholo kunye noyilo oluneenkcukacha lokwakha
* Ukukhethwa kwemodeli yezixhobo kunye nokwenza ngokwezifiso
* Ukufakwa kunye nokugunyaziswa
* Ukuqinisekiswa kwezixhobo kunye nenkqubo
* Itekhnoloji yokuvelisa idlulisa
* Amaxwebhu anzima kwaye athambileyo
* Uqeqesho lwabasebenzi abanezakhono njalo njalo.
Ngaba unayo ezi ngxaki zilandelayo?
• Amagqabantshintshi endululo yoyilo akabalulekanga, uyilo alunangqiqo.
• Uyilo lobunzulu alumiselweyo, ukuphunyezwa kunzima.
Inkqubela phambili yenkqubo yoyilo iphume kulawulo, ishedyuli yokwakha ayinasiphelo.
• Umgangatho wezixhobo awunokwazi de ube usilele ukusebenza.
• Kunzima ukuqikelela iindleko de ulahlekelwe yimali.
• Ukuchitha ixesha elininzi kubatyeleli abatyelelayo, ukunxibelelana ngesindululo solawulo kunye nolawulo lokwakha, thelekisa enye nenye kaninzi-njalo.
Iven ibonelela ngesisombululo esihlanganisiweyo sobunjineli kumzi mveliso wamayeza kunye nonyango kubandakanya igumbi elicocekileyo, inkqubo yokulawula ngokuzenzekelayo kunye nenkqubo yokubeka iliso, inkqubo yokunyanga amanzi, isisombululo ukulungiselela kunye nokuhambisa inkqubo, inkqubo yokugcwalisa nokupakisha, inkqubo yokuhambisa okuzenzekelayo, inkqubo yolawulo lomgangatho kunye nelabhoratri esembindini njl. ngokweemfuno zeshishini lokuxuba amayeza kumazwe awahlukeneyo kunye neemfuno zomthengi ngamnye, i-IVEN izenzela ngononophelo izisombululo zobunjineli zeprojekti yokujika kunye nokunceda abathengi bethu baphumelele igama kunye nenqanaba kwifayile yamashishini amayeza ekhaya.
Amandla ethu e-R & D oomatshini abaxuba amayeza kwiimveliso zoluhlu lwe-IV zikwinqanaba elikhokelayo kwinqanaba lasekhaya nakwinqanaba eliphambili kwilizwe liphela. Ifake isicelo samalungelo awodwa omenzi wechiza angaphezu kwe-60, inokubonelela ngamaxwebhu onke emvume yokuvunywa kweemveliso zabathengi kunye nesatifikethi seGMP. Inkampani yethu ithengise amakhulu ebhegi ye-IV yesisombululo semveliso kude kube sekupheleni kuka-2014, i-50% yesabelo sentengiso; Iglasi yeglasi IV yemigca yemveliso yokuvelisa isisombululo ngaphezulu kwe-70% yesabelo semarike e-China. Itheyile yokuvelisa isisombululo yebhotile yeplastikhi IV sele ithengisiwe eRashiya, kumbindi weAsia nakuMzantsi-mpuma Asia njl.njl. Ifumana indumiso ngamxhelo mnye kubo bonke abathengi. Inkampani yethu yakhe ubudlelwane obuhle beshishini kunye nabenzi bezisombululo ezingaphezu kwe-300 IV e-China, kwaye bafumana igama elihle eRashiya, Uzbekistan, Pakistan, Negeria nakwamanye amazwe angama-30. Siye sathandwa luhlobo lwaseTshayina xa abavelisi bezisombululo ze-IV kwihlabathi liphela bethenga.Umzi mveliso wamayeza oxuba amayeza lelinye lawona malungu aphambili oMbutho weziXhobo zoMayeza waseChina, iKomiti yeSizwe yobuGcisa kwiMigangatho yeziXhobo zoMayeza, kunye nomenzi ophambili woMatshini woPhuhliso lwaMayeza eTshayina. Silawula ngokungqongqo umgangatho woomatshini, ngokusekwe kwi-ISO9001: 2008, landela i-cGMP, i-GMP yaseYurophu, i-US FDA GMP kunye nemigangatho ye-WHO GMP njl.
Siphuhlise uthotho lwezixhobo ukuhlangabezana neemfuno ezenziwe ngokwezifiso, ezinje nge-Non-PVC Soft Bag / PP ibhotile / iglasi yeglasi IV yemigca yokuvelisa isisombululo, i-ampoule ngokuzenzekelayo / i-vial washing- yokugcwalisa-ukutywina umgca wemveliso, ulwelo lomlomo lokuhlamba-ukomisa- ukuzalisa- Ukutywina umgca wemveliso, isisombululo se-dialysis yokugcwalisa umgca wemveliso, isirinji ekhethiweyo yokugcwalisa umgca wokuvelisa njl njl.
Izixhobo zoNyango lwaManzi：
Liziko lobuchwephesha eliphezulu elijolise kwi-R & D kunye neyunithi yokuvelisa ye-RO yaManzi acocekileyo, inkqubo yokuhambisa amanzi enefuthe elininzi lokucoca amanzi, i-generator yomphunga, inkqubo yokulungisa isisombululo, zonke iintlobo zamanzi kunye netanki yokugcina isisombululo, kunye neenkqubo zokuhambisa .
Sinikezela uyilo lwezixhobo ezikumgangatho ophezulu kunye nokwenziwa ngokuhambelana neGMP, USP, FDA GMP, EU GMP njl.
Ukupakisha ngokuzenzekelayo kunye neNkqubo yoGcino kunye noMzi mveliso：
Njengenkokeli yokuveliswa kwenkqubo yokugcina izinto kunye nokuzenzekelayo, sigxila ekupakisheni okuzenzekelayo nakwinkqubo yokugcina izinto i-R & D, ukuyila, ukuvelisa, ubunjineli kunye noqeqesho.
Nika abathengi yonke inkqubo yokudibanisa ukusuka ku-Auto Packing ukuya kwi-Warehouse WMS kunye nobunjineli be-WCS ngomgangatho ophezulu kunye nenkonzo egqwesileyo, efana nomatshini wokupakisha ibhokisi yeerobhothi, umatshini wokuzenzekelayo ozenzekelayo, inkqubo yeLogistics ezenzekelayo kunye nendawo yokugcina izinto ezizenzekelayo ezintathu-njl.
Ngezona zisombululo zibiza imali eninzi, iiprojekthi zethu kunye neemveliso zethu zisetyenziswa kakhulu kumayeza, ukutya, amashishini e-elektroniki nakwimizi-mveliso yamalungiselelo njl.
Umshini Blood Collection Tube Oomatshini Plant：
Sijolise kumgangatho ophezulu, osebenzayo, osebenzayo kunye nozinzo lwezixhobo zokuvelisa ingqokelela yegazi kunye nenkqubo efanelekileyo ezizenzekelayo. Siye samkela eyona teknoloji yokuqokelela ityhubhu yokuqokelela igazi kule minyaka ingama-20 idlulileyo, kwaye siphuhlise izizukulwana ezininzi zemigca yemveliso yokuqokelelwa kwegazi ekucoceni igazi, ekhuthaza imveliso yokuqokelelwa kwegazi elincomekayo kwinqanaba eliphezulu kwihlabathi liphela.
Senza iinzame ezinkulu kumgangatho wemveliso kunye nezinto ezintsha zobuchwephesha, siphumelele ngaphezulu kwamalungelo awodwa abenzi be-20 yezixhobo zokuqokelela ityhubhu yegazi. Siphucula izixhobo zobuchwephesha ngokuqhubekayo kwaye sibe yinkokeli kunye nomdali wase-China wokuqokelela ityhubhu yeshishini lokuvelisa izixhobo zetyhubhu.
Kumazwe amahlanu akuMbindi weAsia, uninzi lweemveliso zamayeza zingeniswa zivela kumazwe angaphandle, kungasathethwa ke ngokufakwa ngenaliti. Emva kweminyaka eliqela yokusebenza nzima, sele sibancedile ukuba baphume enkathazweni omnye emva komnye. E-Kazakhstan, sakha umzi-mveliso omkhulu wokudibanisa oquka ezimbini iiSoft Bag IV-Solution Production Lines kunye nee-Ampoules Injection Production Lines ezine.
E-Uzbekistan, sakhe i-PP Bottle IV-Solution Pharmaceutical Factory, enokuvelisa iibhotile ezizizigidi ezili-18 ngonyaka. Umzi-mveliso awuzisi nje kuphela inzuzo kubo kwezoqoqosho kodwa unika nabantu basekuhlaleni izibonelelo ezibonakalayo kunyango lwamayeza.
E-Rashiya, nangona ishishini lamayeza liqale ngaphambili, zombini izixhobo kunye netekhnoloji iseyinto yakudala. Emva kotyelelo oluninzi lwezixhobo zaseYurophu kunye nokuthelekisa abathengisi abahlukeneyo baseTshayina, inkulu kakhulu Inaliti yeSisombululo seMveliso yoMvelisi sikhethe ukuba senze iibhotile ze-PP IV-Solution Project ekugqibeleni, enokuvelisa izigidi ezingama-72 zebhotile ye-PP ngonyaka.
I-Afrika enabemi abaninzi, apho ishishini lezamayeza lihlala libuthathaka, lifuna inkxalabo ngakumbi. Okwangoku, sakha iSoft Bag IV-Solution Pharmaceutical Factory eNigeria, enokuvelisa izigidi ezingama-20 zebhegi ethambileyo ngonyaka. Siza kuqhubeka nokwakha iifektri ezenza imveliso ephezulu kakhulu e-Afrika, kwaye sinqwenela ukuba abantu bendawo e-Afrika bafumane isibonelelo esibonakalayo ngokusebenzisa iimveliso ezikhuselekileyo zoxubo mayeza ekhaya.
KuMbindi Mpuma, ishishini elixuba amayeza lisaqala nje, kodwa bebebhekisa e-USA FDA ngezona ngcamango ziphambili kunye nomgangatho ophakamileyo wokujonga umgangatho wamayeza kunye nemizi-mveliso yamayeza. Omnye wabathengi bethu ovela eSaudi Arabia wakhupha i-odolo kuthi yokwenza yonke iSoft Bag IV-Solution Turnkey Project kubo, enokuvelisa ngaphezulu kwezigidi ezingama-22 zebhegi ethambileyo minyaka le.
Kwamanye amazwe aseAsia, ishishini elixuba amayeza libeke isiseko, kodwa akukabikho lula kubo ukwakha umzi mveliso we-IV-Solution ekumgangatho ophezulu. Omnye wabathengi bethu baseIndonesia, emva kwemijikelezo yokukhetha, wasikhetha, thina sisebenza ngamandla awomeleleyo, ukwakha i-IV-Solution Pharmaceutical Factory kwilizwe labo. Siyigqibile isigaba sabo seprojekthi yokujika izinto ngeebhotile ezingama-8000 / iyure eqhuba kakuhle. Kwaye isigaba sabo sesi-2 ngeebhotile ezili-12000 / ngeyure, siza kuqala ukufakela ngasekupheleni kuka-2018.
• Njengokuba iqela lobuchwephesha linamava angaphezulu kweminyaka eli-10 kunye nezixhobo eziqokelelweyo kwishishini lezamayeza, uninzi lwezinto zokuthengwa kweemveliso zikumgangatho olungileyo, ixabiso loKhuphiswano, ixabiso eliphezulu liyasebenza kwaye linenzuzo.
• Inkqubo yolawulo lobungcali kunye noqinisekiso lomgangatho, uyilo kunye nolwakhiwo lwethu lathobela i-FAD, GMP, ISO9001 kunye ne-14000 yemigangatho yenkqubo esemgangathweni, izixhobo zomelele kakhulu kwaye zinokusebenzisa ngaphezulu kweminyaka eyi-15. )
• Iqela lethu loyilo elikhokelwa ziingcali ezininzi kwishishini lezamachiza elinobuchule obugqwesileyo bobuchwephesha, abanezakhono ezinzulu, ukuqinisa iinkcukacha, Ukuqinisekisa ngokupheleleyo ukuphunyezwa ngempumelelo kweprojekthi.
• Ngokubala ngononophelo, ukucwangciswa okuqiqayo kunye nenkqubo yokubalwa kweendleko ezikhethekileyo, ukulawulwa kwesikali kunye nokwandiswa kweendleko zokwakha abasebenzi, ngaloo ndlela kuqinisekiswe ukuba amashishini anenzuzo elungileyo.
Nenkxaso yeqela leenkonzo ezixhaswayo kwi-intanethi nakwi-intanethi ngeelwimi ezininzi, ezinje ngesiNgesi, isiRashiya, iSpanish, isiFrentshi, i-ect, ngaloo ndlela uqinisekisa umgangatho ophezulu kunye nenkonzo efanelekileyo.
• Ngaphezulu kweminyaka eli-10 yamava kwiprojekthi ye-turnkey kwicandelo lezaMayeza elinezakhono zobuchwephesha ezomeleleyo zokufaka kunye nokwakha, iiprojekthi zithobele i-FDA, GMP kunye ne-European Union kunye nokunye ukuqinisekiswa.
Ukunikezelwa kweMeko yeProjekthi
Ndithengisa kwangaphambili Inkxaso yobuchwephesha
1. Thatha inxaxheba kulungiselelo lweprojekthi kwaye unike iingcebiso zesalathiso apho zinokufikeleleka xa umthengi eqala ukwenza isicwangciso seprojekthi kunye nohlobo lwezixhobo ezikhethiweyo.
2. Thumela iinjineli ezinxulumene nezobuchwephesha kunye nabasebenzi bezentengiso ukuba benze unxibelelwano olunzulu kunye nezinto zobuchwephesha zomthengi kwaye banike izixhobo zokuqala uhlobo lokukhetha isisombululo.
3. Nikezela ngenkqubo yeflowutshathi, idatha yobugcisa kunye nolwakhiwo lwezixhobo ezinxulumene nomthengi kuyilo loyilo lwesakhiwo sefektri.
4. Nika umzekelo wobunjineli benkampani ukuze ibhekise kumthengi ngexesha lokukhetha uhlobo kunye noyilo. Kwangelo xesha linye bonelela ngezinto ezinxulumene nomzekelo wobunjineli kutshintshiselwano lobuchwephesha.
5.Hlola intsimi yemveliso kunye nenkqubo yokuhamba kwenkampani. Nika amaxwebhu ahambelana nenkqubo yolawulo lwamalungiselelo kunye nenkqubo yolawulo lomgangatho.
Ulawulo lweProjekthi kwiNtengiso
1. Ngokubhekiselele kwiprojekthi kunye nekhontrakthi yayo esayiniweyo, inkampani iqhuba ulawulo lweprojekthi egubungela inkqubo iyonke ukusuka ekusayineni ikhontrakthi ukuya kutshekhi yokugqibela kunye nokwamkelwa kweprojekthi. Amanyathelo asisiseko ngala alandelayo: ukusayina ikhontrakthi, ukucwangciswa kwegrafu yesicwangciso somgangatho, ukuveliswa kunye nokulungiswa, ukulungiswa kwezinto ezincinci, ukulungiswa kokulungiswa kwendibano yokugqibela, ukuvavanywa kokuhanjiswa, ukuthunyelwa kwezixhobo, ukulungisa isiphelo sendlela, ukukhangela kunye nokwamkelwa.
2. Inkampani iya kutyumba injineli enamava amaninzi kulawulo lweprojekthi njengomntu ophetheyo, oya kuthi athathe uxanduva ngokupheleleyo kulawulo lweprojekthi kunye nokunxibelelana. Umthengi kufuneka aqinisekise izinto zokupakisha kwaye ashiye isampulu. Umthengi kufuneka abonelele ngemathiriyeli yokuqhutywa kweenqwelo moya ngexesha lendibano kunye nokulungisa ingxaki kumthengisi simahla.
3. Ukutshekishwa kwangaphambili kunye nokwamkelwa kwezixhobo kunokwenziwa kumzi mveliso womthengisi okanye kumzi mveliso womthengi. Ukuba itsheki nolwamkelo lwenziwa kumzi mveliso womthengisi, umthengi kufuneka athumele abantu kumzi mveliso womthengisi ukuze bafumane itsheki kunye nokwamkelwa ngaphakathi kweentsuku zomsebenzi ezisi-7 emva kokufumana isaziso semveliso egqityiweyo kumthengisi. Ukuba itsheki kunye nokwamkelwa kwenziwa kumzi-mveliso womthengi, izixhobo kufuneka zikhutshiwe kwaye zijongwe ngobukho bezinto zombini ezivela kumthengisi nakumthengi ngaphakathi kweentsuku zomsebenzi ezi-2 emva kokuba isixhobo sifikile. Ingxelo kunye nengxelo yokwamkelwa nayo kufuneka igqityiwe.
4. Inkqubo yofakelo lwezixhobo igqitywa ngesivumelwano samaqela omabini. Abasebenzi bayo bokulungisa ingxaki baya kukhokela ufakelo ngokwesivumelwano kwaye baqhube uqeqesho lwentsimi lwabasebenzi abasebenza kunye nolondolozo lomsebenzisi.
5. Kwimeko yokuba unikezelo lwamanzi, umbane, irhasi kunye nezinto zokulungisa ingxaki zinikezelwe, umthengi angazisa umthengisi ngefomu ebhaliweyo ukuba athumele abasebenzi ukulungiselela ukulungisa izixhobo. Inkcitho kumanzi, umbane, irhasi kunye nezinto zokulungisa ingxaki kufuneka zihlawulwe ngumthengi.
6. Ukulungisa ingxaki kuqhutywa ngezigaba ezibini. Izixhobo zifakiwe kwaye imigca ibekwe kwinqanaba lokuqala. Kwisigaba sesibini, ukulungisa ingxaki kunye nokuqhutywa kweenqwelomoya kwenziwa kwimeko yokuba isixhobo sokucoca umoya somsebenzisi sicocekile kwaye amanzi, umbane, irhasi kunye nezinto zokulungisa ingxaki ziyafumaneka.
7. Ngokumalunga nokutshekishwa kokugqibela nokwamkelwa, uvavanyo lokugqibela lwenziwa ngokwesivumelwano kunye nencwadi yemiyalelo yezixhobo phambi kwabasebenzi bempahla kunye nomthengi ophetheyo. Ingxelo yokugqibela kunye nokwamkelwa kugcwalisiwe xa uvavanyo lokugqibela lugqityiwe.
III Amaxwebhu oBugcisa aNikezelweyo
I) Idatha yokufumana isiqinisekiso (IQ)
1. Isiqinisekiso somgangatho, incwadi yemiyalelo, uluhlu lokupakisha
Uluhlu lokuhambisa ngenqanawe, uluhlu lweenxalenye zokunxiba, isaziso sokulungisa ingxaki
3. Imizobo yofakelo (kubandakanya isixhobo sokuzoba, ukuzoba indawo yombhobho, ukuzoba indawo yokuhlala, umzobo wombane wombane, idayagrikhi yoomatshini, incwadi yemiyalelo yofakelo nokuphakamisa isibhengezo)
4. Incwadana yokusebenza yeendawo eziphambili ezithengiweyo
II) Idatha yesiqinisekiso sokusebenza (PQ)
Ingxelo yokuhlolwa kwefektri kwiparameter yokusebenza
2. Isatifikethi sokwamkela isixhobo
3. Isatifikethi semathiriyeli ebalulekileyo kumatshini ophambili
4. Imigangatho yangoku yemigangatho yokwamkelwa kwemveliso
III) Idatha yesiqinisekiso sokusebenza (OQ)
1. Indlela yokuvavanya izixhobo zeparameter yobugcisa kunye nesalathiso sokusebenza
2. Inkqubo yokusebenza esemgangathweni, inkqubo yokuhlanjwa komgangatho
3. Iinkqubo zolondolozo nokulungiswa
4. Imigangatho yokungqinelani kwezixhobo
5. Ingxelo yemfundo yokufakelwa
6. Ingxelo yemfundo esemgangathweni
7. Ingxelo yesiqinisekiso sokuqhutywa kolingo
IV) Ukuqinisekiswa kokusebenza kwezixhobo
1.Ukuqinisekiswa okuyisiseko kokusebenza (jonga ubungakanani obulayishiwe kunye nokucaca)
2. Jonga ukuhambelana kobume kunye nobuxoki
3. Uvavanyo olusebenzayo lolawulo oluzenzekelayo ludinga amadoda
4. Ukubonelela ngesisombululo esenza ukuba iseti epheleleyo yezixhobo ihlangane nokuqinisekiswa kwe-GMP
IV Emva kweNtengiso yeNkonzo
1. Misela iifayili zezixhobo zabathengi, gcina unikezelo olungaphazanyiswayo lonikezelo lwezixhobo, kwaye unike iingcebiso kuhlaziyo lobuchwephesha lwabathengi kunye nokutshintshwa.
2. Ukuseka inkqubo yokulandelela. Ndwendwela umthengi ngamaxesha athile xa ufakelo lwezixhobo kunye nokulungiswa kweengxaki kugqityiwe ukondla ulwazi lokusetyenziswa ngexesha ukuze kuqinisekiswe isandi, ukusebenza okuzinzileyo nokuthembekileyo kwezixhobo kunye nokususa ukukhathazeka komthengi.
3. Yenza impendulo kwisithuba seeyure ezi-2 emva kokufumana isaziso sokungaphumeleli kwesixhobo somthengi okanye imfuneko yenkonzo. Lungiselela abasebenzi bokugcina indawo ukuba bafike kule ndawo zingaphelanga iiyure ezingama-24, kunye neeyure ezingama-48 kutshanje.
4. Ixesha lesiqinisekiso somgangatho: unyaka omnye emva kokwamkelwa kwezixhobo. "Iziqinisekiso ezithathu" ezenziweyo ngexesha lewaranti esemgangathweni zibandakanya: isiqinisekiso sokulungiswa (komatshini opheleleyo), isiqinisekiso sokutshintsha (ngokunxiba iinxalenye ngaphandle komonakalo owenziwe ngabantu), kunye nesiqinisekiso sokubuyiselwa imali (kwamalungu ozikhethelayo).
5. Ukuseka inkqubo yezikhalazo ngenkonzo. Yinjongo yethu ephambili ukukhonza abathengi bethu ngcono kwaye samkele ukubekwa kweliso kubathengi bethu. Kuya kufuneka siyiphelise ngokungagungqiyo into yokuba abasebenzi bethu bafuna intlawulo ngexesha lofakelo lwezixhobo, ukulungisa ingxaki kunye nenkonzo yezobugcisa.
Inkqubo yoQeqesho yokuSebenza kunye nokuGcina
1. Umgaqo jikelele woqeqesho "ubuninzi obuphezulu, umgangatho ophezulu, ukukhawuleza kunye nokunciphisa iindleko". Inkqubo yoqeqesho kufuneka isebenze kwimveliso.
2. Ikhosi: Ikhosi yethiyori kunye nezifundo ezenziwayo. Le khosi ithiyori ubukhulu becala ingumgaqo wokusebenza kwezixhobo, ubume, iimpawu zokusebenza, uluhlu lwesicelo, amanyathelo okhuseleko, njl.njl. izixhobo kunye nokutshintshwa kunye nokuhlengahlengiswa kweenxalenye ezichaziweyo.
3. Ootitshala: Uyilo olukhulu lwemveliso kunye namagcisa anamava
4. Abaqeqeshwayo: Abasebenzi abasebenzayo, abasebenzi bokugcina kunye nabasebenzi abanxulumene noko kumthengi.
5. Imowudi yoqeqesho: Inkqubo yoqeqesho yenziwa kwindawo yezixhobo zenkampani okokuqala, kwaye inkqubo yoqeqesho yenziwa kwindawo yomsebenzisi okwesihlandlo sesibini.
6. Ixesha loqeqesho: Kuxhomekeka kwimeko ebonakalayo yezixhobo kunye nabaqeqeshwayo
7. Iindleko zoqeqesho: Ukubonelela ngedatha yoqeqesho yasimahla kunye nokuhlala abaqeqeshwa simahla kwaye bengabizi mali yoqeqesho.
Umatshini weAmpoule À uCoudre Bernina, Umatshini weAmpoule À iCoudre Led, Umatshini ozalisiweyo-weSirinji, Umatshini wokugcwalisa weSirinji ozalisiweyo, Umatshini we-Ampoule À uCoudre Singer, Isirinji elahlwayo kunye neNaliti yokuvelisa umgca,